WARARKA BARAAWEPOST Talaado 4 december 2012<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Taliyaha ciidanka booliska oo ka qaybgalay aaska askarigii ku geeriyoodey qarraxii shalay ka dhacay Buufow
Waxaa maanta maanta lagu aasay ka soo horjeedka dugsiga tababarka ciidanka boliiska �Akademiyada Jeneral Kaahiye� alla ha u naxariistee marxuum Yusuf Osman Kuusow oo shalay ku geeriyooday qarrax lagula eegtay kolonyadii galbineysay wafdigii ay horkacayeen wasiirka gaashaandhigga,wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka wasaaradda garsoorka halka lagu magacaabo Buufow oo ku taal gobolka shabeelada hoose.
Marxuumka o oka mid ahaa ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa u geeriyooday dhaawac shalay kasoo gaaray bam lagu aasay wadada dhinaceeda kadibna halkaas lagula qarxiyay. Qarraxaas ayaa waxa sidoo kale dhaawac uu kasoo gaaray saddex kamid ah ciidamada Qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwo Booliiska iyo Militariga kuwaas oo hadda dhaawacooda lagu dabiibaayo Isbitaalka weyn ee Ciidamada Midowga afrika AMISOM ee ku yaala Xalane.
Aaska maanta loo sameeyey marxuumka ayaa waxa kasoo qeyb galay Taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliyeed iyo saraakiil sare o oka kala socday dhamaan Ciidamada Qalabka sida qeybihiisa kala duwan.
Aaska kadib waxaa halkaas hadal kooban kasoo jeediyey Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed S/gaas Shariif Sheekhuna maye isagoo ugu horeyn Tacsi u diray eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Allaha u naxariistee marxuum Yusuf Osman Kusow, isagoo sidoo kalena kuwo buka u rajeeyey in Alaah caafimaad u siiyo si ay mar labaad howshooda u gutaan uguna shaqeeyaan qarankooda iyo dadkooda.
intaas kadib waxaa booqasho ugu tagay bukaanadii ku jiray isbitaalka weyn ee amisom ee ku yaalo Xalane wasiirka arimaha gudaha iyo amniga qaranka Mudane Cabdikariin Xusen Guuleed iyo wasiirka garsoorka awqaafta iyo diinta Cabdulahi Abyan Nuur, taliyaha ciidanka booliiska soomaliyed, S/gaas sharif Shekhuna Maye taliyaha dugsiga tababarka ee general kaahiye, S/guuto Ahmed Dhayib (dhegacaleen) iyo sidoo kale s/guuto Mohamed Cabdulle Dhoore oo ah xiriiriyaha ciidanka booliiska iyo Amisom.
wasiirka iyo taliyaha, saraakiishii kale ee la soctay ayaa hal hal u gacan qaaday Bukaanadii isbitaalka jiifay intaas kadib ayu wasiirka iyo taliyahuba waxay u balan qadeen askarta dhaawaca ah ineey mar waliba la socon doonaan xaaladooda caafimaad isla markaana ay balan qaadayaan in kuwa aan waddanka gudahiisa caafimadkooda wax looga qaban karin dibada loo qaadi doono si deg deg wasiirka iyo taliyaha ayaa intas kadib waxay la kulmeen eheladii iyo qaraabadii askartii dhaawaca soo gaaray.
Waalidiinta ayaa waxaa wajiyadooda laga dheehan karay iney ku farxeen hadalkii kasoo yeeray wasiirka iyo wafdigiisa intaas kadib ayuu wasiirku u gacan geliyey waalidiintii iyo xaasaskii lacag si ay ugu maareeyaan caruurtii iyo xaasaskii ay ka dhawacmeen,askartaas taas oo sii labo jibaartay niyada askarta dhaawaca ah iyo xaasaskooda.